Wasiirka amniga gudaha oo xilka la wareegay.SAWIRRO. – Radio Muqdisho
Wasiirka cusub ee wasaaradda Amniga Gudaha mudane Cabdirisaaq Maxamed Cumar ayaa maanta xilka wasaaradda si rasmi ah ugala wareegay, wasiirki hore ee wasaaradda Gen. Khaliif Axmad Erag.
Munaasabad lagu qabtay xarunta ay ku shaqayso wasaaradda amniga oo ay ka qeyb galeen guddiga uu R/wasaaruhu u saaray la socodka xil-warejinta iyo marti kale ayuu xilkiisa kula wareegay wasiirka cusub ee wasaaraddaas.
Wasiirka hore ee amniga qaranka Gen. Khaliif Axmed Ereg ayaa tilmaamay in wax badan ay u qabsoomeen wasaaradda muddadii uu xilka hayay, isagoo maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda u mahad celiyay kana codsaday inay si wanaagsan ula shaqeeyaan wasiirka cusub.
Mudane Cabdirisaaq Maxamed Cumar ayaa u mahad celiyay wasiirkii hore, isagoo tilmaamay inay horay u sii wadi doonaan shaqooyinkii socday, ayadoo loo howl gali doono sidii loo horumarin lahaa ammaanka muwaadininta Soomaaliyeed.
R/wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa dhawaan sameeyay guddi ka kooban dhow wasaaradood iyo xafiiska hanti dhowraha qaranka, si ay u fududeeyaan goob joogna uga noqdaan xil wareejinta wasiiradii xukuumaddii hore.